Ra'iisul wasaaraha Canada, Jean Chr�tien, ayaa ku adkaystay go'aankiisii ahaa in uusan ciidamada Canada u dirin dalka Ciraaq, waxana uu sheegay in Canada ay ka qayb qaadankarto dib u dhiska Ciraaq. Ra'iisul wasaaraha oo saxaafada la hadlayey galabnimadii Arbacada asagoo jooga caasimada Canada ee Ottawa waxa uu yiri Canadianku waxay awoodaan in ay taageeraan Ciraaqiyiinta si ay u dhistaan dawladooda iyo hadii ay taageero u baahdaan in laga taakuleeyo dhisida nidaam-sharci. "habka dib u dhiska loo qaabilayaa waa in uu ahaadaa in la dejiyo yool macquul ah" ayuu yiri Jean Chr�tien, waxan auu ku daray "dawlad ku meel gaar ah waa wanaag haddii aysan halkaas joogeyn jiilal ayadoo aan doorasho la qaban"
Arinta hubka halmar wax burburya ee ciraaq asagoo ka hadlaayana waxa uu sheegay in ay weli tahay waqti hore oo aan wax laga sheegikarin arintaas waxan auu yiri "ma ogi waxa xaqiiqada dhabta ah tahay, waxaan aogaan doonaa bilaha soo socda".
Baqdaad: awirkii saddam oo lasoo ridey: Sawirka CBC
MAALINTII 20aad EE DAGAALKA CIRAAQ!!! : APRIL 9, 2003
Waxaa isku soo dubaridey XagarYare
-ISBAHAYSIGA KA DHANKA AH CIRAAQ OO BAADI GOOBAYA SADDAM:Geeri iyo nolol
Saddaam xuseen miyuu ku dhintay banbaanadii lala beegsaday makhaayada ku taala Galbeedka magaalada Baqdaad Mise Wali Wuu Noolyahay?.
Su,aashani waxaa ay talaadadii dhex mushaaxaysay magaalada baqdaad,iyadoo goobo kala duwan oo magaalada rasaas darandoori ah layswaydaarsanaayay.
ugu yaraan Sadex goobood oo saddam muhiim u ahaa ayaa lagu tuuray laguna baabi,iyay galabnimadii isniinta B-1-BOMBER oo ka dhaca mid kamida nooca diyaaradaha dagaalka ee maraykanka.
waxaa marka bomkaas la tuuraayay ay diiraddu si gaar ah u saarayd makhaayadda ay ciidamada sirta maraykanku u soo sheegeen militariga in ay saacadaas soo galeen Saddam Xuseen iyo labadiisa wiil ee Udaay iyo kusaay,, oo ay waliba weheliyaan saraakiil cul culus oo golaha sare ee ciraaq kamida.
Banbaanadaas oo aad u xoog waynayd laguna tuuray xaafad ka mida baqdaad oo layiraa Mansuur,waxaa ay dhulka la goysay illaa 300 mitir oo isku wareeg ah iyadoo hoos u galaysa korra u soo rujinaysa marka ay qaraxdo illaa 18mitir oo hoos ah.
Waxaa halkaas laga heley laba qof oo mayd ah,balse waxaa la aaminsanyahay in ay 14 qof ku dhinteen iyadoo wax yar uun kadib qaraxaas ay goobta oo sigaara diiradu u saarayd ay yimaadeen saraakiil maraykan ah"nin ciidamada sirta ah ayaa sheegay in ay dad badani meesha ku aasmeen oo sida ugu dhaqsaha badan looga soo saaraayo,iyadoo ujeedadu tahay in la baaro dhiigga,iyadoo la adeegsanayo qaabka looyaqaan DNA ama hiddo raacida dhiiga,bal si loo hubiyo in saddaam meesha tiisii ku dhamaatay.
LABA QOF OO KALIYA AYAA OG MEELAHA SADDAAM JOOGO-
DADka Saddam xuseen aadka u yaqaan ayaa ku tilmaama in uu yahay nin markiisii horeba u dhashay Feejignaan gaar ah,taas oo jirta ayuu tobaneeyadii sano ee danbe si gaara isu ilaaliyaa ama loo ilaaliyaa,waxaa ogaankara oo kaliya laba qof hadba meesha uu ku suganyahay.
waxaa ogaan kara oo kaliya Wiilkamida labadiisa wiil Kusaay oo ah taliyaha ciidamada nabad galyada madaxweynaha,iyo xoghayntiisa gaarka ah Caabid Xamiid Maxamuud, waxaana warka sidaas oranaaya laga soo xigtay nin maamulka ciraaq kamid ahaa oo haatan magangalyo siyaasadeed dalka dibadda uga maqan.
Diiraddan lasaaraayo iyo weeraraka kali ahaantiisa lala beegsanaayo saddaam waxaa ay socotay intuu dagaalku socday oo dhan, 20kii march ayaa weerar ku dulwaabariistay baqdaad waxaa sigaara loogu bilaabay meelo gaar ah oo ay ciidamada sirta soo siisay militeriga, oo ay filayeen in Saddam xuseen lagu dilikaro.